Obbo Baqqalaa Garbaa eenyuu? Isiin eenyu jettuun? - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Baqqalaa Garbaa eenyuu? Isiin eenyu jettuun?
Goodayyaa suuraa Obbo Baqalaa Garbaa
Obbo Baqqalaa Garbaa hayyuu Oromoo fi nama siyaasaa Godina Wallaga Lixaa, Ganda dhiheenya Boojjii Birmajiitti bara 1961akka dhalatan ragaaleen ni mul'isu.
Barnoota isaanii sadarkaa tokkooffaa achuma mana barnootaa Boojjii Birmajiitti erga baratanii booda, barnoota isaanii sadarkaa lammaffaa mana barnootaa Gimbii sadarkaa lamaffaatti baratan.
Obbo Baqqalaan digrii jalqabaatiin Yunivarsitii Finfinnee irraa Afaan Ingilizii fi Ogbarruun erga eebbifamaniin booda, Manneen barnootaa Dambi Dolloo fi Najjootti barsiisaniiru.
Erga bara 2001 barnoota diigrii lammaffaa isaanii Ingliffaan yunivarsitiidhuma Finfinnee irraa xumuraniin boodas, Kolleejjii Barsistootaa Adaamaatti Afaan Ingilizii fi Afaan Oromoo barsiisaniiru.
Yeroo sana mormii barattootaa waggaadhaan dura gaggeefamee ture deeggartee jirtaa jechuudhaanis bara 2005tti kolleejicha irraa arii'aaman.
Isaan boodas gara Magaalaa Finfinneetti siquun waggoota lamaaf yunivarsitiiwwan dhunfaa lamatti barsiisaa tura. Isaan boodas bara 2007tti yunvarsitii Finfinneetiin dhaabbataan qaxaramuun afaan Inglizii barsiisuu itti fufan.
Seenaan siyaasaa Obbo Baqalaas bara 2009 erga paartii mormituu Warraaqsa Federaalistii Dimokiraatawa Oromoo (OFDM) akka miseensa koree hojii raawwachiftuu fi ittigaafatamaa kutaa Qunnamtii Ummataatti hojachuu eegalanii booda ture.
Obbo Baqqalaan bara 2010tti filannoo keessatti hirmaatan illeen paartiin biyya bulchaa jiru filannichaan teessoo mana marii bakka bu'oota ummataa harka 99 kan mo'ate ana waan jedheef, osoo hin mikaa'iin hafaniiru.
Haadha warraa saanii Aadde Haannaa Raggaasaa waliinis ijoollee afur kan godhatan Obbo Baqaalaan, bara 2011tti qabamanii mana hiidhaa Ma'akalaawii jedhamutti hidhamuun miseensonni maatii fi abokaatoon illeen akka hin agarreef baatii lamaaf dhorkamanii turan.
Dhaaba motummaa Itoophiyaatiin balaaleeffame Adda Bilisummaa Oromoo waliin walitti dhufeenya qabda jechuun hidhaan waggaa saddeettiii itti murtaa'e.
Ol iyyannoo Mana Murtii Olaanaatti taasisaniinis, adabbiin isaanii gara waggaa sadii fi baatii torbaatti gadi bu'eef.
Bara 2012ttis Sochii Dimokraatawa Federaalawaa Oromoo (OFDM) fi Kongirasii Ummata Oromoo (OPC) walitti makamuun Kongirasii Fadaraalawaa Oromoo (OFC)n erga hundaa'een booda, osuma mana hidhaa jiranuu Obbo Baqalaa Ogganaa duree ta'uun mudaman.
Obbo Baqaalaan bara 2015tti erga hidhaa itti murtaa'e xumuruun hikamanii, affeerraa daawwannaa isaaniif taasifameen gara Ameerikaa deeman.
Wayita Baqala Garbaa gara manaa galanitti haala ture
Walgahii Waldaa Qorannoo Oromoo irratti haasawaa seena qabeessa akka taasisan dubbatama.
Baruma sana keessas mormiin cimaan wareegama lubbuu hedduu kaffalchiise naannoo Oromiyaa keessatti gaggeefamuu eegale. Kunis mormii maastar pilaanii magaalaa finfinnee fi magaalota Godina addaa naannawa Finfinneetiin kan wal qabate ture.
Muddee 2015 ammoo Obbo Baqaalaa dabalatee namoota 21 mormicha kakaasuu fi dhaaba shororkeessaa jedhaman waliin hidhata qabdu jedhamuun qabamanii hidhaman.
Mana hidhaa garaa garaa keessatti dararamni cimaan erga irra gahaa tureen booda bara 2016 Ebla keessa himannaan shororkeessummaa irratti baname.
Adoolessa bara 2017 ammoo himannaan shororkessuummaa gara himata yakkaatti geeddarame. Haa ta'u malee manni murtii Olaanaa mirga wabii diduun akka turu taasifaman.
Jalqaba bara 2018 kaasee rakkina fayyaa isaan mudateef waldhaansa foyya'aa akka argataniif dhiibbaan karaa garaa garaatiin taasifamaa ture. Haa ta'u malee manni murtii 'dhaddacha jeeqxanii jirtu' jechuun al lama addabbii hidhaa ji'a jahaa jahaa itti murteesse.
Guraandhala 12, 2018 motummaan himannaa isaanii kaasuu ifa taasise. Borumtaa isaaa guyyaa Kibxataa Guraandhala 13, 2018 Obbo Baqaalaa dabalatee namoonni isaan waliin hidhaa keessa turan torba gadi lakkifamaniiru.
Kanaafuu, nammoonni hedduun Obbo Baqaalaan hayyuu, goota, abbaa obsaa fi fakkeenya cimina oggantoota siyaasaati jedhu.